Iimpawu ezi-5 eziBalulekileyo zokuKhangela kwiPlatifomu yoKwakha ifom ye-Intanethi | Martech Zone
Ukuba ujonga indlela elula, esebenzayo nekhuselekileyo yokuqokelela ulwazi olufunayo kubaxumi bakho, amavolontiya, okanye amathemba, amathuba okuba umakhi weefom kwi-Intanethi angayonyusa imveliso yakho ngokucacileyo. Ngokufezekisa umakhi weefom kwi-Intanethi kumbutho wakho, uya kuba nakho ukuyeka iinkqubo zokuthatha ixesha kunye nokugcina ixesha elininzi, imali kunye nezixhobo.
Nangona kunjalo, zikhona izixhobo ezininzi phaya ongakhetha kuzo, kwaye ayizizo zonke abakhi beefom online zenziwe zilingana. Kule posti yebhlog, uya kufunda malunga nezinto ezintlanu ekufuneka ubenazo ekufuneka ujolise kuzo xa ukhetha umakhi wefom ye-Intanethi yombutho wakho.
Phawu 1: Iifom kunye neempendulo ezingenamkhawulo
Nokuba usebenza kwishishini elincinci okanye iqumrhu elikhulu, uya kufuna ukukhetha umakhi weefom kwi-intanethi kunye neqonga lokuqokelela idatha elikuvumela ukuba wakhe iifom ezininzi kwaye uqokelele iimpendulo zeefom ezininzi njengoko ufuna. Izixhobo ezininzi apha phandle zibeka ikepusi kwinani leefom onokuzakha okanye kwinani leempendulo onokuziqokelela, ezinokubangela ukuphazamiseka ngakumbi kunokuba zisombulula.
Emva kokuba uqalise ukusebenzisa iifom ze-intanethi kwiimeko zakho zokuqala zokusetyenziswa, kunokwenzeka ukuba ufumane iindlela eziluncedo ngakumbi zokuzisebenzisa obungakhange uzicinge ngaphambili. Ngesi sizathu, licebo elilungileyo ukuqinisekisa ngaphambi kwexesha ukuba umakhi wefom yakho uya kuba nakho ukulungiselela iimfuno zakho kwixa elizayo. Ekuhambeni kwexesha, umakhi wefom elingenamda yeyona nto inokuthenjwa, inokuthenjwa, kwaye inyuse iindleko.
Phawu 2: Uluhlu olubanzi lweZakhono zokuHlanganisa
Injongo ephambili yokwakha iifom kunye nokuqokelela iimpendulo kwi-Intanethi kukwenza lula iinkqubo zeshishini. Ukuthatha inyathelo eliya phambili, kubalulekile ukuba ukhethe umakhi weefom kwi-intanethi ehambelana nezixhobo kunye neetekhnoloji osele uzisebenzisa. Iifom zewebhu ezidityanisiweyo zinokunxibelelana ngokuzenzekelayo nezinye iinkqubo zakho, zikongela ixesha kunye nomzamo.
Ukuba usebenzisa iCRM njengeSalesforce, jonga iqonga lefom yewebhu ene enamandla, ukuhlanganiswa ngamandla kwe-Salesforce. Iifom ezikwi-Intanethi ezinxulunyaniswe ne-Salesforce zinokuphakanyiswa ukwandisa ubuhlobo bomsebenzisi, kwaye zinokuhlaziya, zijonge phezulu, kwaye zenze izinto zesiko kunye nemigangatho kwi-Salesforce. Obu buchule bunokonyusa imveliso kunye nokuguqula iinkqubo zombutho.
Umzekelo, xa Umbutho woLutsha waseKentucky YMCA i-Salesforce eyamkelweyo, amalungu abasebenzi athabathe iFomAssembly ngotshintsho olukhawulezileyo. Ukwenza njalo kuye kwavumela umbutho ukuba ufikelele ngaphezulu kwabafundi abayi-10,000 ngonyaka ngokudityaniswa kweSalesforce. Ukukwazi ukuqokelela kunye nokusebenzisa idatha ecocekileyo, ehleliweyo kwi-Salesforce ivumela iqela ukuba lixhase ngcono uluntu lwabo.
Kwangokunjalo, ukudityaniswa kukaGoogle, iMailchimp, iPayPal, kunye nezinye izixhobo ziya kwenza ukuqokelelwa kwedatha kungabinamthungo kubasebenzi nakubathengi bakho.
Phawu 3: Ukhuseleko kunye nokuThobela
Nokuba uqokelela idatha kubathengi, abasebenzi, abaguli, amavolontiya, okanye amathemba, ukhuseleko nokuthobela azinakuthethathethana. Khetha umakhi weefom kunye neqonga lokuqokelela idatha elihambelana nemithetho yabucala yedatha esebenza kuwe nakubathengi bakho, njengeHIPAA, GDPR, GLBA, CCPA, PCI DSS Level 1, nabanye. Xa ukhetha iqonga elithobelayo, awukhuseli kuphela idatha oyiqokelelayo, kodwa wakha ukuthembeka kunye nokuthembela kubathengi bakho.
Ukugcina iifom zakho kunye neempendulo zikhuselekile ngakumbi, jonga ukubethela ekuphumleni nasekuhambeni. Kwakhona, qiniseka ukuba iqonga lakho linokhetho lokugcina idatha ethe-ethe njengoko kufuneka. Ngala manyathelo okhuseleko akhoyo, uya kuba nakho ukuqiniseka ukuba yonke idatha oyiqokelelayo ihlala kwizandla ezilungileyo.
Phawu 4: Ukuguquguquka kunye nokwenza ngokwezifiso
Xa ukhetha umakhi wefom, uya kufuna kwakhona ukuqinisekisa ukuba uya kukwazi ukwenza iifom zakho ngokwezifiso ukuhlangabezana neemfuno zakho. Endaweni yokulungiselela iifom ekunzima ukuzakha, khetha iqonga elinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zetemplate ezinokukunceda ukuba uqalise kunyawo lwasekunene.
Umakhi wefom elungileyo kunye neqonga lokuqokelela idatha kuya kuba lula ukuyisebenzisa ngaphandle kwesakhono sakho sobugcisa. Ukuqinisekisa ukuba abadlali beqela lakho bayakwazi ukufumana iifom kwaye basebenze ngokukhawuleza ngaphandle kokuxhomekeka kwiqela lakho le-IT, khetha enye enikezela nge-khowudi, indlela yokujongana nomsebenzisi. Kukwabalulekile ukujonga ukuze uqiniseke ukuba uya kuba nakho ukwenza ubume beefom zakho kunye noyilo ukuze utshatise uphawu lwenkampani yakho ngamava omsebenzisi angenamthungo.
Phawu 5: Inkxaso yabaThengi ethembekileyo
Okokugqibela kodwa ngokuqinisekileyo kungaphelelanga apho, qiniseka ukuba ukhetha iqonga lefom yewebhu ngokuthembekileyo uxhaso lwabathengi iqela xa unokuba unayo nayiphi na imibuzo, inkxalabo, okanye ukubamba. Kuxhomekeka kuhlobo lwedatha oyiqokelelayo, unokufuna ukuqaphela ukukhetha ukhetho olunikezela ngenkxaso ephambili kwimeko kaxakeka. Ukuze umbutho wakho ufumane eyona bang inkulu, uya kufuna ukuqiniseka ukuba iqela labo lenkxaso yabathengi likulungele kwaye likulungele ukukunceda kuyo nayiphi na imiceli mngeni.
Amanye amaqonga abonelela ngenkxaso yokuphunyezwa kunye noqeqesho ukunceda abathengi ukuba baqalise iiprojekthi ezinkulu, ezinokuba luncedo kakhulu ekuhambeni kwexesha. Ukuba unetyala elinzima ngakumbi kwaye ufuna uncedo njengoko usukuma kwaye usebenza, inkxaso yokufezekisa sisibonelelo esingundoqo ekufuneka usikhangele.
Xa ulapho ujonge umakhi weefom kwi-intanethi ogqibeleleyo kunye neqonga lokuqokelela idatha ukuze uhambise ukuhamba komsebenzi kumbutho wakho, qiniseka ukuba ugcine ezi zinto zintlanu zibalulekileyo engqondweni.
IfomAssembly ngumakhi wefom-in-one kunye neqonga lokuqokelela idatha elinika zonke ezi zinto kunye nokunye okuninzi. Amawakawaka emibutho kuwo onke amashishini asebenzisa indibaniselwano eyomeleleyo yeFomAssembly, imigangatho ephezulu yokhuseleko kunye nokuthotyelwa, kunye nomakhi weefom ekulula ukusombulula iingxaki zokuqokelelwa kwedatha kunye nokwenza lula iinkqubo ezinzima.
Jonga iFomAssembly bukhoma kwisilingo sasimahla, akukho khadi lekhadi elifunekayo. Sebenzisa Martech ZoneIsaphulelo seqabane kunye nekhowudi UKWENZA 20K.
Uvavanyo lwasimahla lweFomAssembly
tags: ccpaukuthobelaukuqokelelwa kweenkcukachaumakhi wefomiimpawu zomakhi wefomifomathigdprI-GLBAuphandoHIPAAumakhi weefom online
URachel Skroback ngumbhali woMxholo kwiFomAssembly.
Acquire.io: Iplatifomu yokuzibandakanya yabathengi emanyeneyo